ကလေးလေးတွေကို ဂရုစိုက်ကြင် နာကာ မေတ္တာတရားများနဲ့ ပြုစုေ စာင့်ေ ရှာက်နိုင်သူ ခိုင်နှင်းဝေအေ ပ်ါမှာ လေးစားမိတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းေ ဝရဲ့ ချစ်သူ ဇင်မြင့်အောင် – XB Media Myanmar
ကလေးလေးတွေကို ဂရုစိုက်ကြင် နာကာ မေတ္တာတရားများနဲ့ ပြုစုေ စာင့်ေ ရှာက်နိုင်သူ ခိုင်နှင်းဝေအေ ပ်ါမှာ လေးစားမိတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းေ ဝရဲ့ ချစ်သူ ဇင်မြင့်အောင်
July 6, 2020 Bestie_Author
ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကိုပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ ခိုင်နှင်းဝေကေ တာ့ အနုပညာအလုပ်အပြင် တတ်နိုင်သလောက် ပရဟိတအလုပ်တွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပရဟိတမင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူမရဲ့ ချစ်သူ ဇင်မြင့်အော ကိုလည်း တရားဝင်တွဲနေကြောင်း ချပြထားပြီး နှစ်ယောက်အတူ ပရဟိတအလုပ်တွေကို လုပ် ကိုင် ကာ ပျော်ရွှင်တဲ့ စုံတွဲဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ.။
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူမရဲ့ ချစ်သူ ဇင်မြင့်အောင်ရဲ့ အချစ်တွေကြောင့် ပျော်ရွှင်တဲ့ အကြောင်းေ တွကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လေ့ရှိသလို ချစ်သူ ဖြစ်သူ ဇင်မြင့်အောင်ကလည်း ခိုင်နှင်းဝေတို့ သားအမိနှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ကာ အရိပ်တကြည့်ြ ကည့် နဲ့ ချစ်တတ်ပါသေးတယ်။.
ဒီနေ့ ဇူလိုင်လ (၅)ရက်နေ့မှာလည်း ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ချစ်သူ ဇင်မြင့်အောင်က ချစ်သူ ခိုင်နှင်းေ ဝရဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေအပေါ် ဂရုစိုက်ကြင်နာမှုတွေကို ကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်ကာ လေးစား တဲ့စိတ်ဖြစ်မိတဲ့ အကြောင်းလေးကို “ကလေးတွေ ကြည့်ပြီး ပီတိတွေ ဖြစ်သွားတယ်..။ ကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာတွေ အပင်ပန်းခံခဲ့တာတွေ အရမ်းလေးစားမိပါတယ်…။
နောက်ထပ် အများကြီး ကယ်တင် စောင့်ရှောက်နိူင်ပါစေ.” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက် နှာေ ပါ် မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ချစ်သူ ဇင်မြင့်အောင်ကတော့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ကလေးငယ်လေးေ တွ ကို ရင်အုပ်မကွာ သေချာ ဂရုစိုက် ကြင်နာ မေတ္တာတရားထားကာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမှုေ တွက သူ့အတွက် လေးစားတဲ့ စိတ်တွေဖြစ်မိတဲ့ အကြောင်းလေးကို တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတ ယ်နော်.Cele Connections ပရိသတ်ကြီး.။
ဇာတျရုပျတိုငျးကိုပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီး ခိုငျနှငျးဝကေိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ ခိုငျနှငျး ဝကေေ တာ့ အနုပညာအလုပျအပွငျ တတျနိုငျသလောကျ ပရဟိတအလုပျတှကေိုလညျး လုပျကိုငျနတေဲ့ ပရဟိတမငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျနျော.။ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သူမရဲ့ ခဈြသူ ဇငျမွငျ့အော ကိုလညျး တရားဝငျတှဲနကွေောငျး ခပြွထားပွီး နှဈယောကျအတူ ပရဟိ တအလုပျတှကေို လုပျ ကိုငျ ကာ ပြျောရှငျတဲ့ စုံတှဲဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားသူ တှပေါ.။
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သူမရဲ့ ခဈြသူ ဇငျမွငျ့အောငျရဲ့ အခဈြတှကွေောငျ့ ပြျောရှငျတဲ့ အကွော ငျးေ တှကို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလရှေိ့သလို ခဈြသူ ဖွဈသူ ဇငျမွငျ့အောငျ ကလညျး ခိုငျနှငျးဝတေို့ သားအမိနှဈယောကျရဲ့ ခဈြစဖှယျပုံရိပျလေးတှေ ကိုတငျကာ အရိပျ တကွညျွ့ ကညျ့ နဲ့ ခဈြတတျပါသေးတယျ။.
ဒီနေ့ ဇူလိုငျလ (၅)ရကျနမှေ့ာလညျး ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ ခဈြသူ ဇငျမွငျ့အောငျက ခဈြသူ ခိုငျနှငျးေ ဝရဲ့ ကလေးငယျလေးတှအေပျေါ ဂရုစိုကျကွငျနာမှုတှကေို ကွညျ့ပွီးပီတိဖွဈကာ လေးစား တဲ့စိတျဖွဈမိတဲ့ အကွောငျးလေးကို “ကလေးတှေ ကွညျ့ပွီး ပီတိတှေ ဖွဈသှားတယျ..။ ကောငျးကောငျးစောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တာတှေ အပငျပနျးခံခဲ့တာတှေ အရမျးလေးစားမိပါ တယျ…။
နောကျထပျ အမြားကွီး ကယျတငျ စောငျ့ရှောကျနိူငျပါစေ.” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြ နှာေ ပျါ မှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ခဈြသူ ဇငျမွငျ့အောငျကတော့ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ ကလေးငယျ လေးေ တှ ကို ရငျအုပျမကှာ သခြော ဂရုစိုကျ ကွငျနာ မတ်ေတာတရားထားကာ ပွုစုစောငျ့ ရှော ကျပေးမှုေ တှက သူ့အတှကျ လေးစားတဲ့ စိတျတှဖွေဈမိတဲ့ အကွောငျးလေးကို တငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတ ယျနျော.Cele Connections ပရိသတျကွီး.။
ဒုတိယကိုယျဝနျလှယျထားရပွီဖွဈတဲ့ ခြှေးမလေးကို Surpriseပှဲလေးလုပျ ပေးခဲ့တဲ့ ခငျလှိုငျတို့မိသားစုရဲ့ Video
မီးဖိုချောင်စရိတ်သက်သာဖို့ နည်း လမ်းကောင်းလေးမျှဝေလိုက်တဲ့ နေမျိုးေ အာင်ရဲ့ဇနီး